Edugan iyo Butin oo ka shiray xaalada kurdiyiinta Suuriya – Radio Muqdisho
Edugan iyo Butin oo ka shiray xaalada kurdiyiinta Suuriya
Wakaaladda Wararka ee Reuters ayaa baahisay in Turkiga iyo Ruushku ay ka shirayaan in Kurdiyiinta Suuriya laga saaro magaalooyinka ku yaala Waqooyiga Suuriya ee Manjib iyo Kobani marka ay madaxdu ku kulmaa magaaladda Sochi todobaadka dambe.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa warbaahinta ku xaqiijiyay in Putin iyo Erdogan ay ka wada hadli doonaan in magaalooyinka muhiimka ah laga bixiyo gacanta Kurdiyiinta.
Xukuumadda Ankara ayaa Khamiistii waxaa ay heshiis la gaartay Maraykanka waxayna ogolaatay in ay gulufka waqooyiga Suuriya hakiso taas badelkeedana ay Kurdiyiintu dib u gurtaan.
Talaadada Todobaadkaan ayuu Madaxweynaha Turkigu u safri doonaan magaaladda ku taala xeebta badda madow.
Waxaa la filayaa in ay madaxdu go’aamiyaan cidda gulufka qaadi doonta, haddii ay tahay Ciidanka Turkiga ama kuwa Suuriya oo gacan ka helaya Ruusha.